Yelula Bearings, Tapered Roller Bearings, Needle Roller Bearings - LGGB
Gxila ku-Automobile Service
I-China Ningbo Cixi LGGB Bearings Co., Ltd. itholakala eCixi Ningbo, eZhejiang Povince., Ingumkhiqizi ogxile emabhethini.
Insizakalo ye-LGGB yomibili imakethe ye-OEM neyabahambisi. Amabherethi ethu asetshenziswa ezimbonini zezimoto, ezezimboni, ezezimayini, ezolimo, ezokuphatha impahla nezokuthutha. Bakhombise ukuthi baphumelele ezinhlelweni ezibucayi, okushiya kungabazeki mayelana nekhwalithi nokwethembeka kwemikhiqizo yethu. Umkhiqizo we-LGGB we-LGGB ukhule waba ngomunye wabahlinzeki abazimele abakhulu nabahlonishwayo abazimele eChina.
Amabombo Amayunithi Nezindlu UCP Series
Ukunikeza uchungechunge lwe-Housings HC
Siphinde futhi sinikeze izinzuzo ezinkulu kuwo wonke amakhasimende ethu, amasha namabili abuyayo. Zizwe ukhululekile ukubheka ezinye izizathu zokuba iklayenti lethu futhi ube nokuhlangenwe nakho kokuthenga okungenazihibe.
Izimoto eziqinisekisiwe zezinhlobo nobukhulu obuhlukahlukene
Isilinganiso se-Super credit-to-price kanye nemikhiqizo eminingi
UNovemba 05, 2020
Ukubamba iqhaza kwenkampani kulwazi lombukiso
Okthoba 24, 2020
1. Ukugoba noma ukungahambi kahle kwephayiphu lamanzi kuzodala ukuthi ipompo lamanzi lidlidlize futhi lidale ukushisa noma ukugqoka kokuthwala. 2. Ngenxa yokwanda kwe-axial thrust (ngokwesibonelo, lapho ibhalansi yediski nendandatho ebhalansi empompini yamanzi igqoke kakhulu), umthwalo we-axial ekuthwalweni ...